ne admin pane 20-10-31
Zvimiro zveCa Zn Stabilizer
Iyo yekugadzirisa renji yeCa Zn inogadzikana yakatetepa, uye izvo zvinodiwa zvekugadzirisa zvinofanirwa kuitwa zvakanyanya. Inofananidzwa neyechinyakare inoumbwa inotungamira kupisa inodzikamisa, iyo-yenguva refu kupisa kusagadzikana kugadzikana kweCa Zn kupisa kupisa kunodzikamisa kuchiri kwakashata. Nguva yekugara yakareba ...
Hunhu hwaCa Zn Stabilizer
Ca Zn stabilizer ine dispersibility yakanaka, kuenderana, kugadzirisa fluidity, yakafara kugadzikana uye yakanakisa pamusoro pekupedzisa mukugadzirisa nePVC resin.Iine yakanakisa kudziya kwemafuta, diki yekutanga hue, isina kunaya, isina simbi inorema uye zvimwe zvine chepfu zvigadzirwa. kwete vu ...
Ca Zn Inogonesa
Ca Zn stabilizer inogadzirwa neakasarudzika komputa tekinoroji ine calcium munyu, zinc munyu, mafuta uye antioxidant senhengo huru. Izvo hazvigone chete kutsiva zvine chepfu zvigadzikiso zvemutobvu, cadmium munyu uye organotin, asi zvakare ine yakasarudzika yakanaka yekupisa kugadzikana, mwenje kugadzikana, kujekesa ...
Mabasa ePVC Stabilizer
Iyo PVC inogadzikana inonyanya kunonoka kana kumisa kudzikisira kwepurasitiki pasi pechiito chemuviri uye zvemakemikari zvinhu. PVC stabilizer inofanirwa kuve neanotevera mabasa. Chekutanga pane zvese, iyo PVC inodzikamisa inogona kutsiva anoshanda uye asina kugadzikana echlorine maatomu mumorekuru uye anodzivisa iyo dehydroch ...
Akajairika Mhando dzePVP Heat Stabilizers
Pvc kupisa stabilizer imhando yePVC stabilizer.inonyanya kushandiswa kwePV uye nemamwe macolorine ane mapolymers. Nekuda kwekusagadzikana kwekushisa kwemhepo ye polyvinyl chloride, mazhinji ePVC zvigadziri anoshandiswa kune polyvinyl chloride. Zvakajairika PVC kupisa zvinopisa zvinosanganisira kutungamira zvinodzora, sipo yesimbi ...
Mhando dzePVC Stabilizers
Mhando huru dzePVC dzinogadzirisa isalt lead uye isina guruva-yakasanganiswa inotungamira munyu kupisa zvinopisa, isingawanzo pasi inoumbwa inosimbisa simbi uye calcium uye zinc inosimudzira kupisa kudzikamisa. Tungamira munyu kupisa inodzikamisa chigadzirwa chakagadzirwa zvinobudirira muma1950, uye yatora chinzvimbo chikuru ...
Nei PVC Heat Stabilizer Inofanira Kuwedzerwa KuPVC Kugadziriswa?
PVC ndeimwe yeanonyanya kupisa-anononoka ma polymers muindastiri ayo anowanzo tenderera kune kupisa kwemafuta. Yakachena polyvinyl chloride resin inonyatsotarisa kupisa. Kana iyo tembiricha yekupisa yasvika pamusoro pe90 ℃, inozo nyongana zvishoma kupisa. Kana tembiricha inosvika 120 ° C, H ...
Mhando dzePVC Heat Stabilizer
PVC kupisa inodzikamisa chinhu chinowedzera chinogona kudzivirira kana kudzikisira kudzikisira kwepolymer kana kuyambuka-kuyanana nekuda kwekupisa panguva yekugadzirisa uye kushandisa, uye kuwedzera hupenyu hwebasa rezvinhu zvinoumbwa. PVC inogadzikana inogona kuiswa muzvikamu, mafuta asidi sipo, organotin makomputa, inosanganiswa kupisa kudzikama ...
PVC Heat Inodzikamisa
PVC kupisa kudziyisa zvinonyanya kushandiswa kwePV uye nezvimwe zvine chlorine zvine mapolymers. Pakati pezvose zvinogadzirisa mapolymers, PVC kupisa inodzikamisa ndiyo yakanyanya kushandiswa. Kugadzikana kwekupisa kwePV kuri murombo, uye kunoitika kukuvara uye kuyambuka-kubatanidza maitiro pasi pechiito chekupisa, mwenje, oxygen ...
Zvinodiwa zvePVC zvinowedzera
Iyo yekuwedzera inofanirwa kukwanisa kupararira muchigadzirwa zvakadzikama uye zvakaenzana kwenguva yakareba uye kushandisa zvainoita. Naizvozvo, zvinowedzerwa zvinofanirwa kuve nekuenderana kwakanaka nePVC. Yekuzadza, inorganic pigments uye zvimwe zvinowedzera zvisina kunyungudika muPV, diki diki uye yakanaka dispersibilit ...
Pvc Imwe Pack Inodzikamisa, PVC Stabilizer, Pvc Heat Inodzikamisa, PVC Kupisa Kunodzikamisa Flexbile, PVC Isina-Inotyisa Stabilizer, PVC yokuvirisa,